တရုတ်လုပ် Sinopharm ကာကွယ်ဆေးသည် အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်းအပါအဝင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ၇၃-ခု ဖော်ပြထား၍ ကမ္ဘာ့ ဘေးအန္တရာယ် မကင်းဆုံး ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ဟုဆို၊ မူရင်း တရုတ်လူမှုကွန်ယက်သတင်းကို အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာတို့က ထိုင်ဝမ်မီဒီယာမှ ကူးယူဖော် ပြ။ တရုတ်ကာကွယ်ဆေးနှင့် နိုင်ငံတကာတုန့်ပြန်မှု – H2Oupdatenews
တရုတ်လုပ် Sinopharm ကာကွယ်ဆေးသည် အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်းအပါအဝင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ၇၃-ခု ဖော်ပြထား၍ ကမ္ဘာ့ ဘေးအန္တရာယ် မကင်းဆုံး ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ဟုဆို၊ မူရင်း တရုတ်လူမှုကွန်ယက်သတင်းကို အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာတို့က ထိုင်ဝမ်မီဒီယာမှ ကူးယူဖော် ပြ။ တရုတ်ကာကွယ်ဆေးနှင့် နိုင်ငံတကာတုန့်ပြန်မှု
oungmarine11@outlook.com 12/01/2021	No Comments
လွန်ခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ၃၀-ရက်နေ့တွင် တရုတ်အမျိုးသားဆေးဘက်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့က #BBIBP-CorV အမည်ရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံအတွင်း အထွေထွေသုံး အဖြစ် တရားဝင် အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါကာကွယ်ဆေး ကို #တရုတ်အမျိုးသားဆေးဝါးကော်ပိုရေးရှင်း (Sinopharm) ၏ လက်အောက်ခံ #တရုတ်အမျိုးသားဇီဝနည်းပညာအုပ်စု ( CNBG ) က ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ် သည်။ တရုတ်အစိုးရ၏ အတည်ပြုခြင်း ခံရသော ၎င်းဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးမှာ နှောင်းပိုင်းအဆင့်စမ်း သပ်မှုများ အရ ထိရောက်မှု ၇၉.၃၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း ပေကျင်းအစိုးရပိုင် မီဒီယာများက ရေးသားခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ( Sinopharm ဟု အများသိကြသည့် ) ၎င်းကာကွယ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ နေရာကွက်၍/တစ်ကိုယ် လုံး၌ #ဓါတ်မတည့် တုန့်ပြန်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည့် ဖော်ပြထားချက်များကို ရေတွက်ကြည့်ရာ ၇၃-ခုရှိနေသည်ကို စိတ်မသက်သာဖွယ် တွေ့ရှိရသည်ဟု ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက် ကာကွယ်ဆေးကျွမ်းကျင်သူ #တောက်လင်နာ က တရုတ်လူမှုကွန်ယက် Weibo ၌ လွှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း ဟောင်ကောင် မီဒီယာ Ming Pao က ရေးသားသည်။
ဆေးထိုးသည့်နေရာ၌ နာကျင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အပြင် သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊ အရသာခံစားမှု ပျောက်ကွယ်ခြင်း၊ ရာသီဓမ္မတာ ထိန်ခြင်း၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း စသည့် ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိသည်ဟု ပါရှိနေကြောင်း တောက်လင်နာက သူ၏ ကာကွယ် ဆေး၏ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲစာမျက်နှာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်းဖြင့် ဖော်ပြထားသည်ဆို၏။
#ဓါတ်မတည့် တုန့်ပြန်မှု ၇၃-ခု အထိ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း အသိပေးထားသည့် အဆိုပါဆေးဝါးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်မကင်းဆုံးကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်ဟုသာ ရည်ညွှန်းရန်ရှိတော့ကြောင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများတွင် ယခုကာကွယ်ဆေးလောက် #ဓါတ်မတည့် တုန့်ပြန်မှုများပြားခြင်း မရှိသဖြင့် လုံး၀ မကြုံစ ဖူးဖြစ်ရကြောင်း၊ ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှည်လျားစွာ ဖော်ပြထားပါလျှက် လက်ခံထိုးနှံသူသည် ၎င်းဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားလာပါက လျော်ကြေးတောင်းခံပိုင်ခွင့်မရှိ “ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆန်ခြင်း” ပင်ဖြစ်သည်ဟု တောက်လင်နာက စွပ်စွဲထားသည်။
Sinopharm ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော တောက်လင်နာ၏အကောင့်ကို Weibo အာဏာပိုင်များက ချက်ချင်း ဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်ရာ ၎င်း၏ စာမျက်နှာတွင် “ စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သောကြောင့် ဤအကြောင်းအရာကို ကြည့်ရှု့၍ မရနိုင်ပါ”ဟူသော စာတန်းကိုသာ မြင်ရတော့သည်။
အသက် ၄၃-နှစ် အရွယ်ရှိသူ တောက်လင်နာသည် #ရှန်ဟိုင်းရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာ #SCDC တွင် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လကတည်းက တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
တရုတ် ( ပြည်မကြီး) မှ ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ တောက်လင်နာ၏ တရုတ်လူမှုကွန်ယက်၌ ဖော်ပြချက်ကို ဟောင်ကောင်မီဒီယာက တရုတ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပြီး ထိုင်ဝမ်သတင်းစာက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြန်လည်ရေးသားသည်။ ၎င်းသတင်းကို အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့် ဗြိတိန် Daily Mail တို့က မှီငြမ်း/ကူးယူ ဖော်ပြကြောင်း လက်လှမ်းမီသမျှ တွေ့ရှိရသည်။
Sinopharm သည် အမှန်တကယ် အတည်ပြုခံရပြီး ဆေးဝါးဟုတ်-မဟုတ်ဆိုသည်မှာ တရုတ်ပြည်တွင် ပြဿ နာမရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် အုပ်ချုပ်သူတို့ကမူ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်ဟု New York Times ( Nov. 17, 2021 ) က ရေးသားသည်။
တရုတ်အစိုးရကမူ Sinopharm ကို ဈေးကွက်တင်ရန် အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ဇန်နဝါရီ ၄-ရက်နေ့အထိ ပထမ ၂-ရက်အတွင်း နိုင်ငံအတွင်း လူပေါင်း ၇၃,၀၀၀ ကို ကာကွယ်ဆေး အခမဲ့ထိုးနှံပေးခဲ့ကြောင်း၊ ၂-ကြိမ်ထိုးနှံရမည့် ကာကွယ်ဆေးအတွက် ပေကျင်းမြို့ တစ်ဝှန်းလုံးတွင် စင်တာပေါင်း ၂၂၀ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ဦးစားပေးထိုးနှံသွားမည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ( npr., Jan. 04 2021 )
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် SinoPharm ကုမ္ပဏီမူပိုင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးအနက် BBIBP-CorV ကို အာဂျင်တီးနား၊ ဘာရိန်း၊ အီဂျစ်၊ ဂျော်ဒန်၊ မော်ရိုကို၊ ပါကစ္စတန်၊ ပီရူး၊ ယူအေအီးနိုင်ငံတို့ရှိ လူပေါင်း ၆၀,၀၀၀ ကျော်တို့၌ တတိယအဆင့် ကြားကာလစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယူအေအီးတွင် BBIBP သည် Covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွင် ဆေးဝါးထိရောက်မှု ၈၆ ရာနှုန်းရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ( Gulf News., Dec.09 2020)
Sinopharm သည် ဘာရိန်းနှင့် ယူအေအီးတွင် “ အရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ပြုချက် “ ရရှိထားသည်။ mRNA အမျိုးအစား ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သော BBIBP-CorV သည် သာမန်ရေခဲသေတ္တာများ၏ အပူချိန်တွင် သိုလှောင်သယ်ပို့နိုင်ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်စေနိုင်ဖွယ်ရှိ သည်။
(( တရုတ်နိုင်ငံ၏ Covid-19 ကာကွယ်ဆေး အခြားတစ်မျိုးမှာ #Sinovac_Biotech မှ ထုတ်လုပ်သော #CoronaVac ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလလယ်တွင် တတိယအဆင့် ကြားကာလစမ်းသပ်မှုကို ဘရာဇီး၊ ချီလီ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် တူရကီတို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ တရုတ်ပြည်တွင်း၌ အရေးပေါ်အဖြစ် လူသန်းချီထိုးနှံပေးခဲ့သော ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပြီး ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးထိရောက်မှု ၅၀ မှ ၉၀ ရာနှုန်းရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ဆို၏။ အလားတူပင် အင်ဒိုနီးရှား၌ ၆၅.၃ %၊ တူရကီတွင် ၉၁.၂၅ % ရှိကြောင်း အသီးသီးတွေ့ရှိရသည်။ ( Reuters., Dec. 24 2020 )
WHO က ဆေးဝါးထိရောက်မှု ၅၀ ရာနှုန်းသာရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုထားသော Sinovac ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် အရေးပေါ်အဖြစ် နံနက်ဖန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှစတင်ကာ တစ်ပြည်လုံး၌ ထိုးနှံပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း Niki Asia က ယနေ့ဖော်ပြသည်။
လူဦးရေ သန်း ၂၇၀ခန့်ရှိသော အင်ဒိုနီးရှားတွင် ၁၂-လအတွင်း လူပေါင်း ၁၈၁-သန်းတို့အား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနိုင်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။ ထို့ပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ကြိမ်ရေပမာဏ ၂၂၉-သန်း ရရှိရန် စီစဉ်လျှက်ရှိရာ Sinovac နှင့် Novavax အပြင် WHO ၏ ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ် COVAX မှလည်း ရယူမည်ဖြစ်ပြီး AstraZeneca နှင့် Pfizer ကာကွယ်ဆေးများကိုမူ သန်း ၅၀ ဝယ်ယူမည်ဟု သိရှိရသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( Taiwan News., Jan. 06 2021, China’s Sinopharm vaccine ‘most unsafe in world’ with 73 side effects. Side effects of China’s vaunted Sinopharm vaccine include loss of vision. By Keoni Everington ” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင်ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ ကော့ခ်ဘဇားစခန်းမှ အခြားနေရာများသို့ ထွက်ခွာနေဆဲဖြစ်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ခံ။ အနီးအနားနေသူများနှင့် တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများအကူအညီဖြင့် ပြင်ပသို့ သွားလာနေ။ စခန်းများပတ်လည်၌ သံဆူးကြိုးခတ်ခြင်းလုပ်ငန်း မကြာမီပြီးစီးမည်။
Next Next post: ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့အား အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ။ ဖယ်ဒရယ်အရေးပေါ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီကို အခွင့်အာဏာအပ်နှင်း၊ ပြည်မ ၅၀-ပြည်နယ်အားလုံးတို့နှင့် အစိုးရရုံးစိုက်ရာမြို့တော်တို့၌ လက်နက်ကိုင်ဆန္ဒပြပွဲများ ပေါ်ပေါက်နိုင်ကြောင်း FBI သတိပေး